Indawo yokuhlala yaseScottish yasehlotyeni - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yaseScottish yasehlotyeni
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJanie
Intle ihlaziyiwe ngokupheleleyo igumbi lokulala eli-1 elinendawo yokuhlala ekhululekileyo kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo.
Le flethi yindlu ekumgangatho ophantsi ekwazi ukufikelela kwigadi enelanga, negadi yabucala ngasemva kwepropathi.
Ifakwe kwisitrato esithe cwaka e-Aidrie, kufutshane nezinto eziluncedo zalapha ekhaya ezinje ngeevenkile, iindawo zokutyela kunye neendawo zokuhamba ezintle. Isikhululo sikaloliwe esikufuphi sibonelela ngokufikelela okulungileyo kuzo zombini iGlasgow nase-Edinburgh. Ikwanika ukufikelela ngokulula kwindlela yemoto yaseGlasgow, Edinburgh, Stirling nangaphaya.
Indlu enkulu yeentsapho ezincinci okanye izibini ezijonge ukonwabela imisebenzi emininzi eyonwabisayo eGlasgow kunye neendawo eziyingqongileyo.
Le flethi ibonelela ngegumbi elitofotofo elinesibini kunye nebhedi enkulu yesofa kwigumbi lokuhlala ekwaziyo ukulala ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezimbini.
4.86 out of 5 stars from 296 reviews
4.86 · Izimvo eziyi-296
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi296
Iflethi ikwindawo ezolileyo kodwa kuninzi onokukwenza. Kukho ivenkile encinci eluncedo nje isitalato esinye phezulu ukusuka eflethini. Kukwakho nenani leevenkile ezinkulu ezinkulu nje ngaphezulu kwekhilomitha ukusuka kwipropathi.
Kukho inani leendawo zokutyela kunye neebha kufutshane kunye nezikhululo zepetroli kumgama oziikhilomitha ukusuka kwiflethi.
Ukusuka kwiflethi kulula ukufikelela kwinani lezinto ezinomtsalane zasekhaya ezifana neZiko lexesha leCapsule Leisure, iSummerlee Heritage Park kunye neDrumplier Country Park.
Umbuki zindwendwe ngu- Janie
I’m a young entrepreneur who enjoys traveling, good food and adventures. I really enjoy renting out my home to people from all over the world.
Iindwendwe zinokudityaniswa kwipropathi kwaye zihlolwe ngumnini, nangona kunjalo sikhetha ukusebenzisa ibhokisi yokutshixa nto leyo ethetha ukuba iindwendwe zinokufika ngexesha elibalungeleyo. Iindwendwe zingaziva zikhululekile ukuqhagamshelana nam ngalo naluphi na uncedo ngexesha lokuhlala kwazo.
Iindwendwe zinokudityaniswa kwipropathi kwaye zihlolwe ngumnini, nangona kunjalo sikhetha ukusebenzisa ibhokisi yokutshixa nto leyo ethetha ukuba iindwendwe zinokufika ngexesha eli…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- North Lanarkshire